Online News 2021-04-07 05:36:00 – Nexus Online News
Online News 2021-04-07 05:36:00
थोर, Asgard को सिंहासन को भावी उत्तराधिकारी, हिम्मत र वफादार मित्रहरु र एक भाइ संग उनको घमण्ड पूरा गर्न को लागी, फ्रोजन दुनिया मा आक्रमण गर्ने निर्णय। त्यस समयको राष्ट्रिय चलचित्रमा यस प्रकारको प्रतिनिधित्व विरलै थियो। जेनेरेसन, तपाईंको आफ्नै मार्ग पत्ता लगाउनको लागि आवश्यकता – एक मूर्ख दृश्य द्वारा तपाईंको मुड हराउन बिना।
मिशेल परिवार र मेसिन विद्रोहले शल्यक्रियाले वाइफाइमा दौडिरहेका मानिसहरूलाई देखाउँदछ, छिमेकीहरू र सेलफोनहरूको अद्भुत परिवार र खाने टेबलमा खाना र कटलरी जस्ता महत्त्वपूर्ण चीजहरू।
यी सबै नैतिक पाठ बिना डिस्नेको विशिष्ट, तर एक अराजक स्वरमा। चलचित्र प्राविधिक रूपमा उज्जवल छ। यद्यपि उनी आफ्नो परिवारमा विस्थापित भएको महसुस गर्छिन् र आफ्नो बुबा (ड्यानी म्याकब्राइड) सँग द्वन्द्वमा बस्छिन्,
जो चिन्तित छ कि उसकी छोरी पेशेमा असफल हुनेछ किनभने उसले भविष्यको धेरै देखिन। चलचित्रको अन्त्यमा बनेको एउटा सानो खुलासा, एनिमेसनको समयमा सानो विवरणमा निर्मित, बोल्ड र बुद्धिमान सिनेमा चाहनेहरूको हृदय हार्दिक बनाउँछ।
मेरो लागि, ड्यानी बॉयल एक ओभररेटेड निर्देशक हो। एक दिन ऊ उठ्छ र युटाको घाटीहरू अन्वेषण गर्न बाहिर जान्छ। दुर्भाग्यवस, उसको विडंबना झन झन विकृतिमा परिणत भयो, हाम्रो वास्तविकतामा मूर्खको लागि दोषी छ, जसको साथ उसले अझै राम्रा कुरा गर्दछ।
रोगिरियो सग्न्जेरलाले साहित्यिक पूरकमा फिल्म आलोचकको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गर्दछ। यद्यपि पृष्ठभूमिमा पनि महिला प्रतिनिधित्वले लोकतान्त्रिक विरोधी सरकारको बिरूद्ध क्रान्तिको विकासमा स्पष्ट रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
मजदुर वर्ग र मध्यम वर्गको हितको कुनै गठबन्धन छैन, व्यक्तित्ववाद बढ्दैछ, विशेष गरी सांस्कृतिक उद्योगको बलियो विकासको समयमा। उनका फिल्महरूका लिपिहरूको विश्लेषण गर्दा, केही आलोचकहरू, अविश्वसनीय जस्तो लाग्न सक्छ, उनीहरूलाई `es चीसी ” को रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्छन् – एक दिन द न्यू योर्क पत्रिकाका लेखक र निबंधकार डेभिड डेन्बीले बकवास गरे कि प्रख्यात रंगहरू देखा पर्दछ उनका फिल्महरू, तिनीहरू डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा प्रयोगमा लिईएको जस्तै देखिन्छन (हेलो? मेरो नाम कला हो, तपाईंलाई भेटेर राम्रो लाग्यो!)।
सत्य यो हो कि हामी सिनेमाको एक प्रतिभासँग काम गर्दैछौं, एक अद्वितीय भाषाको साथ, केही कलाकारहरू मध्ये एक जो उनीहरूको कलामा अरूको समानता देख्छन् – यो थिएटर हो, चित्रकला वा संगीत।